Gaabinta waa wax lagu garaaco maalmihiisa hore App Store | Wararka IPhone
Gaabinta waa guul maalmaha ugu horeeya, waxaan kugula talineynaa qaar
Gaabinta waa mid ka mid ah codsiyada soo jiitay xanta ugu badan maalmihii la soo dhaafay, gaar ahaan maadaama ay ahayd waqti fiican beta. Apple waxay u soo bandhigtay inay tahay hab Siri looga dhigo mid caqli badan, si hufan maxaa yeelay waxay qaadataa sida ugu wanaagsan ee shaqa joojinta ah iyo tan ugu wanaagsan ee Siri, isku darka labada codsi iyo siinta natiijooyin aan caadi ahayn.
Saaxiibkeen Nacho Aragonés wuxuu wadaagay waddo yar oo aan ku bilaabi karno liiskayaga 'Spotify playlist', sidoo kale waxaan leenahay kuwa kale oo si toos ah ugala soo degsada YouTube. Gaabinta ayaa noqotay guul aan horay loo arag oo horeyba ugu soo dusay "sare" ee barnaamijyada bilaashka ah ee laga soo dejiyo App Store.
Waxaan dooneynaa inaan ka faa'iideysano fursad aan kula talinno kanaal telegraam kaas oo aad kula wadaagi karto dariiqooyinkaaga gaaban isticmaaleyaasha isla mar ahaantaana aad marin ka dhigan karto keydkeeda ugu wanaagsan ee Isbaanishka, ka soo gal CADADKA. Si la mid ah waxaan wadaagnaa labadooda oo aan daqiiqad kahor ka hadalnay:
Marin toobiye si aad u soo dejiso fiidiyowyada YouTube
Marin toobiyaha si loo furo liistooyinka Spotify ee leh Siri
Taas oo ah Gawaarida ayaa is taagay waqtiga qorista booska kow iyo tobnaad ee barnaamijyada bilaashka ah ee laga soo dejiyo App Store, helitaanka celcelis ahaan 4,3 xiddigood, in kasta oo ay tahay in la yiraahdo arrintan la xiriirta in Apple uu khiyaanay xoogaa iyadoo la ilaalinayo dhibcaha iyo dib u eegista ay Workflow ku jirtay waqtigaas. In kasta oo ay run tahay in codsigu wali si buuxda ugu saleysan yahay Workflow oo uu si fudud u fududeeyay isticmaalkiisa oo uu si buuxda ugu dhex daray Siri.
Way cadahay taas haddii toobiyeyaashu bilaabaan inay fayras galaan oo la wadaago, bulshada ayaa ku kori doonta iyadoo la abuurayo tuuryo faa iido leh oo sii kordheysa oo markaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay sida ugu fiican uga helaan taleefannada casriga ah ee xoogga badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Gaabinta waa guul maalmaha ugu horeeya, waxaan kugula talineynaa qaar
Ma aqaan akhristayaasha kale, laakiin ma furi karo kanaalka telegram. Laga soo bilaabo iPad-ka, Telegram-ka waxaa lagu furaa iyada oo loo marayo safari mana furto wax kanaal ah
Ku jawaab Santos
Xiriirinta toobiye ee lagu soo dejinayo fiidiyowyada youtube waa xun.
Ugu yaraan fiiri kooxda telegram
U jawaab quduusiinta
"Gaabanka ayaa is taagay markii la qorayay booska kow iyo tobnaad"
Aynu aragno haddii xilliga qorista khadadkaas ka dib qof dib u eego
kow iyo tobnaad, tagaa
1. adj. Qeyb baa laga sheegay: Inay ka mid tahay kow iyo tobanka qaybood ee isle'eg ee guud ahaan loo qaybiyay.
Waad ku mahadsantahay waqtiga aad siisay google oo halkan ku nuqul. La saxay.
Fadlan hagaaji xiriiriyaha kanaalka Telegram
Weydiiso lambar taleefan si aad ugu dhex daadato spam.
Waxaan idhi, xiriiriyeyaashu ma shaqeeyaan
Fadlan hagaaji xiriirka ka maqan waxaan jeclaan lahaa inaan ku biiro
Xidhiidhyadu ma shaqeeyaan
Waxaan fiidiyow kugu tusineynaa dhammaan wararka watchOS 5
Dib u eegista koowaad ee Apple Watch Series 4